Olee otú Iji Zọpụta Money On Train n'ego ụgbọ | Save A Train
Home > Zụọnụ Ndụmọdụ > Olee otú Iji Zọpụta Money On Train n'ego ụgbọ
Oge Ọgụgụ: 3 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 17/07/2020)
Ejegharị obodo, ma ọ bụ n'obodo ukwu ruo n'obodo, bụ a dị ịtụnanya n'ezie ahụmahụ na voyaging ụgbọ okporo ígwè na-otu nke kasị mma ụzọ ime nke a. European ụgbọ okporo n'ego ụgbọ na-dabeere n'ụzọ dị ukwuu na anya gara, Otú ọ dị, ọtụtụ European okporo ígwè na ụlọ ọrụ nwere ugbu a kpaliri a ike ịnye ọnụahịa usoro - ka airfares - na nke a ụgbọ agbanwe dabere na ina, mgbochi, ma ọ bụ otú n'oge ị na-azụta. Ma ị na-eme atụmatụ ịga Austria, Belgium, Britain, France, Germany, or Italy, a obere nnyocha tupu gị ụgbọ okporo ígwè na njem ike inyere gbatịa gị ego. ebe a na- n'elu Atụmatụ on esi zọpụta ego na ụgbọ okporo ígwè n'ego ụgbọ mgbe gị na njem.
Ọ bụrụ na dị, advance train tickets typically go on sale 6 ọnwa n'ihu nke-ejegharị ejegharị oge. Otú ọ dị, ntinye akwụkwọ ọbụna dị nnọọ a di na nwunye nke izu tupu ka nwere ike azọpụta gị a zuru ezu ego nke ego, n'ihi ya, anaghị imefusị ọ bụla oge!
Mgbanwe na oge nke afọ na ị chọrọ njem
N'ịbụ mgbanwe na mgbe ị chọrọ ịga pụrụ mgbe mgbe ịkpata oké ego. Train tiketi ahịa ebili n'oge elu oge ezumike na ụfọdụ mba Europe. Nke a bụ a gburugburu n'oge okpomọkụ ọnwa, karịsịa na July na August.
Ọ bụrụ na ị nwere nhọrọ ime njem na mpụga nke ndị a ọnwa, the tickets can be much cheaper to purchase. Ọzọkwa n'oge ememe dị otú ahụ dị ka Christmas na Easter, ndị a bụ ndị ọnụ ọgụgụ kasị elu ugboro - elele mgbe ezumike ụlọ akwụkwọ na-na-na-agbalị izere ndị a.
Rebook gị tiketi – zọpụta ego na ụgbọ okporo ígwè n'ego ụgbọ
Ọ dịtụwo mgbe ị gbaa akwụkwọ a ụgbọ okporo ígwè tiketi naanị ịhụ na ụgbọ ama esịn adịghị anya mgbe i mere gị zụọ? Train ticket prices tend to fluctuate – mgbe na otu ụbọchị. Dabere na ụlọ ọrụ si kagbuo iwu, ị kwesịrị ị na a na-enwe ike ịkagbu na re-akwụkwọ gị ụgbọ okporo ígwè na a ala ọnụego ma ọ bụrụ na ị na-eme ihe n'ime 24 awa gị mbụ zuo.
Bordeaux ka Biarritz Ụgbọ oloko
Paris na Biarritz Ụgbọ oloko
Lyon ka Biarritz Ụgbọ oloko
Marseilles ka Biarritz Ụgbọ oloko
Ụfọdụ ụgbọ okporo ígwè na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-agbanwe karịa ndị ọzọ na ha kagbuo oge. Mgbe ụfọdụ, ị nwere ike ịkagbu gị tiketi na mpụga nke 24-hour window. Ọ dị mkpa iji chọpụta gị ụgbọelu si website na-agụ banyere ya atumatu tupu ịzụta ọzọ tiketi. Jide n'aka na-na-a achọgharị ọhụrụ ụgbọ okporo ígwè ahịa na ichekwa ego site rebooking gị tiketi na a ala ọnụego.
Nantes na Bordeaux Ụgbọ oloko
Paris na Bordeaux Ụgbọ oloko
Marseilles ka Bordeaux Ụgbọ oloko
-Uru nke ego – Olee otú zọpụta ego na ụgbọ okporo ígwè n'ego ụgbọ
ụfọdụ European ụgbọ okporo ụzọ gasị enye ịrịba ego maka ụmụaka, ụmụ akwụkwọ, na ndị agadi na-eme njem. Children si afọ atọ na iri na otu n'ozuzu nweta ezigbo pasent anya, mgbe ụmụaka na-erubeghị afọ 3 typically travel free. Students and senior discounts may be available depending on the trains and destination you are traveling to. Ọ dị mkpa ka gị na-amụrụ ma ọ bụ agadi kaadị na gị mgbe niile ma ọ bụrụ na ị na-azụ a ego tiketi.
E nwere ọtụtụ ego n'ego ụgbọ dị nile dị iche iche European okporo ígwè netwọk. Jide n'aka na-mgbe niile na-a ele anya maka ọhụrụ discounts site na-eso anyị facebook na twitter peeji nke.
Na-eche echiche nke na-ewere a ụgbọ okporo ígwè na-ọkacha mmasị gị European obodo? gaa anyị website saveatrain.com lelee niile anyị nanị n'ego ụgbọ na-amalite na-eme atụmatụ gị ọzọ njem!
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, wee pịa ebe a: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/how-to-save-money-on-train-fares/ - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/es_routes_sitemap.xml, na i nwere ike ịgbanwe / es ka / ya ma ọ bụ / de na ndị ọzọ asụsụ.
Eme ka ndụ na Save A Train